Adeegga - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
Inta badan waraaqaha shaandhada waxay ka samaysan yihiin fiber galaas ah oo ka timid Shirkadda America HV. Oo waxaan leenahay xiriirka saaxiibtinimo ee iskaashiga shirkadda HV muddo sanado ah. Shirkada Korean AHLSTROM sidoo kale waa shuraakadayada. Warqadeeda faylka ayaa u oggolaanaysa nolosha adeegga dheer ee alaabtayada. Inta lagu jiro muddada iskaashiga, isticmaaleyaal badan ayaa ka dib marka ay adeegsadaan shaandhada noocan oo kale ah waxay dejin doonaan amar ku celis ah.
"Hadda, shirkadeena waxay dhistay xiriirka iskaashi ee la-hawlgalayaasha ka socda wadamada sida USA, Thailand, Pakistan, Jordan, Malaysia, Iran, iwm. Inta badan wakiilada alaabadayadu waxay leeyihiin shabakad iib ah oo awood leh, taas oo faa'iido u leh alaabtayada. kor u qaadida. Inta lagu jiro iskaashiga aan la leenahay macaamiisha dibedda, awooddayada wax soo saarka ee xoogga leh ayaa waqtigeeda u diyaarin karta alaabta dalabaadka waaweyn ee macaamilka. Dhammaan badeecadaha waxay ka samaysan yihiin alaabta ceeriin ee laga keeno Ameerika ama Kuuriya. Shirkaddayada ayaa si aad ah loo qiimeeyay isticmaaleyaal badan, sababtoo ah tayada sare, nashqada gaarka ah, iyo gaadiidka degdega ah ee alaabtayada.
Siyaasadaha doorbida ayaa loo soo bandhigi doonaa dalabka koowaad. Waxaan siin karnaa macmiilka cusub muunado bilaash ah, laakiin isaga ama iyada waa inay qaataan khidmadaha gaadiidka. Wakiilada kaliya, waxaanu si joogto ah u diri doonaa shaqaalahayaga farsamada si ay u bixiyaan hagitaan farsamo."